Asa tanterahina - PADAP
Ireo mpiasan’ny tetikasa PADAP dia miasa mafy amin’ny fanabeazana ny mponina momba ny tombontsoa azo avy amin’ny fampiasana ny loharano maharitra. Mahakasika faritra maro ny hetsika. Ao anatin’izany ny fananganana vondrona, fakan-kevitra amin’ny famerana ny faritra hafindra, ny fahatsapana ny fanadihadiana ara-tsosialy sy toekarena, ny fananganana ala, ny ekolojika, ny fizaram-paritra, ny famelabelarana ireo fifanarahana iraisana (dina). Misy ny antontan-taratasy mifandraika amin’ny famindrana ny fitantanana ny loharanon-karena voajanahary avy amin’ny governemanta amin’ny vondrom-piarahamonina… Ny tetikasa dia mitady vahaolana ihany koa amin’ny tsy fahampian’ny vokatra sy ny tsy faharetan’ny fitaovana famokarana, izay olana fototra amin’ny famokarana eto an-toerana.
Ny tetikasa PADAP dia mikendry ihany koa ny fanamafisana ny fanitarana, ny fanoloran-tena, ny famindrana teknolojia ary ny rafitra fitantanana ny tetikasa eo an-toerana. Izany no antony anomezana fanampiana ara-teknika ireo fikambanana maro toa ny “Centres de Services Agricoles” (CSA) na ivon-toerana misahana ny fambolena, ny “Fonds de Développement Agricole” (FDA), ao koa sampan-draharaha mpikaroka FOFIFA, ny « Fonds Régional de Développement Agricole” (FRDA) na ny Tahirim-paritry ny fampandrosoana ny fambolena. Raha ilaina ny fanohanana ny famoronana fikambananan’ny vondrom-piarahamonina vaovao dia atao ao amin’ny tetikasa PADAP.
Ankoatra izay, ny tetikasa PADAP dia mifantoka amin’ny olana mifandraika amin’ny fitantanana ny tany eo an-toerana. Manome fanampiana ireo biraon’ny fananan’ny kaomina ao amin’ireo faritra misy ny tetikasa izy ireo mba hanamafisana ny fahafahana miasa eo an-toerana. Hiantohan’izy ireo ihany koa ny fanoratana ny zon’ny fananantany sy ny fitantanana ny tany. Ho fanatanterahana izany dia hotanterahina ny fanavaozana ny arisivan’ny tany sy ny fanamafisana ny “Plans Locaux d’Occupation Foncière” (PLOF) na drafi-ponenana momba ny tany. Mifanindran-dàlana amin’izany, ireo mpamatsy tolotra tsy miankina dia hanao asa eny ifotony mba hanamafisana ny fizotry ny fizaram-pananana eo an-toerana sy hampiroborobo ny famoahana an-tany ny kaonteran’ny kaontenera kaominaly. Tompon’andraikitra amin’ny fanaovana fanisam-bahoaka momba ny tany sy fanamarinana ny zon’ny fananan-tany ireo masoivoho.
Farany, ny tetikasa PADAP dia mampiroborobo ihany koa ny fampiarana ny miralenta sy ny fanatsarana ny fiainan’ny vehivavy, ny fianakaviany ary ny fiarahamonina misy azy ireo. Ny tanjony dia ny hanampiana ny vehivavy hiditra amin’ny loharanom-pamokarana, ny fahalalana ary ny teknolojia momba ny fambolena, ao anatin’izany ny masomboly karazana vary manatsara ny fiovan’ny toetr’andro; zezika; fampidirana hafa mahasoa ny famokaram-bary; ary fanatsarana ny zava maniry hambolena lavanila, jirofo, kakaô, kafe, ledisia ary ireo voly laharam-pahamehana.